सलमान र ऐश्वर्याको २० वर्ष पूरानो तस्बिर किन भयो भाइरल ? | Ratopati
सलमान र ऐश्वर्याको २० वर्ष पूरानो तस्बिर किन भयो भाइरल ?
एजेन्सी – सन् १९९९ मा फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ बाट एक अर्कासँग प्रेममा परेका ऐश्वर्या राय र सलमान खानको एउटा पूरानो तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको छ ।
सलमान र ऐश्वर्याको जोडी बलिउडमा अत्याधिक रुचाइएको जोडी हो । उनीहरुको जोडी जस्तै प्रेम पनि अगाध नै थियो । तर, सम्बन्धमा आएको विभिन्न समस्याले उनीहरुको सम्बन्ध टुट्यो ।
भाइरल भइरहेको तस्बिरमा सलमान र ऐश्वर्या सँगै बसिरहेका छन् । ऐश्वर्याको हातमा मग छ । सलमान भने हल्का मुस्कान दिएर बसिरहेका छन् । भारतीय सञ्चार माध्यम पञ्जाब केशरीका अनुसार उक्त तस्बिर उनीहरुको डेटिङको हो । तस्बिरमा क्याप्सन ‘Nations wants to know who leaked this pictures!’ लेखिएको छ ।
यद्यपि, सलमान र ऐश्वर्या यतिबेला आ–आफ्नो नीजि जीवनमा व्यस्त छन् । ऐश्वर्या अभिषेक बच्चनसँग बिहे गरेर वैवाहिक जीवन व्यतित गरिरहेकी छिन् भने सलमान अझैसम्म अविवाहित छन् ।
पाकिस्तान विमान दुर्घटनामा नायिका र उनका श्रीमानको मृत्यु ? यस्तो छ वास्तविकता
भारतबाट आएका थिए बाराका २३ कोरोना संक्रमित
‘छैन मलाई पीर’मा नाजिर र कुसुमको रोमान्स
नायिका वर्षा सिवाकोटी लेख्छिन्, ‘मेसेज पठाउनु र कमेन्ट गर्नुअघि नाम–थर हेर्ने कष्ट गरिदिनुहोला’
फजुल खर्चमा कैँची चलाउँदै अर्थ मन्त्रालय
भारतमा २४ घन्टायता ६ हजार ९७७ संक्रमित
कोरोना अपडेटः विश्वभर ३ लाख ४६ हजारको मृत्यु, अमेरिकामा मृतकको संख्या १ लाख नजिक